सिकलसेलको उपचार निःशुल्क गराउने यी युवा डाक्टर – Tharuwan.com
सिकलसेलको उपचार निःशुल्क गराउने यी युवा डाक्टर
July 19, 2017 July 30, 2017 admin
कृष्ण अधिकारी/हाम्रो कथाबाट।
पश्चिम तराईका आदिवासी थारूहरू पुस्तौंदेखि पेट, छाती र हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, शरीरमा रगतको कमी हुने र दुब्लाउँदै जाने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित थिए । यसको उपचार कसैलाई थाहा थिएन । मूल कारण पत्ता नलगाई उपचारको प्रयत्न गर्दा रोग निको भएन । उपचार होला भनेर गरेको खर्चले थारू समुदायका कैयौँ परिवार कंगाल भए । धेरैको अकालमै ज्यान गयो ।
दुईचार बर्ष मात्र होइन, बीस बर्षदेखि नियमित उपचार गराउँदा समेत रोग पत्ता नलाग्दा थारू समुदायका बिरामीहरू तनाबमा थिए । बाँके र बर्दिया जिल्लाका बिरामीहरू गाउँका स्वास्थ्यचौकीदेखि नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल हुँदै काठमान्डौ तथा छिमेकी देश भारतका दर्जनौ अस्पतालहरूसम्म पुगे । जहाँ गए पनि उनीहरूले आफूलाई लागेको रोग थाहा पाउन सकेनन् जसबाट उनीहरूको जीवन थप निराश र कष्टकर बन्दै गयो ।
बिरामीहरू अस्पतालमा नयाँ डाक्टर आएको थाहा पाउनासाथ नयाँ आशा लिएर उनीकहाँ जचाउँन पुगिहाल्थे । त्यही क्रममा २०६८ मंसिरमा भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा पदस्थापन भएर आएका डाक्टर राजन पाण्डेको ओपिडिमा थारू समुदायका बिरामीहरू एकै किसिमको स्वास्थ्य समस्या लिएर जचाउँन आउन थाले । एकै समुदायका धेरै बिरामीको उस्तै समस्यामा देखेपछि भर्खरै एमडिको पढाइ सकेका ३० वर्षीय तन्नेरी डाक्टर राजनले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिए ।
उनले बिरामीका पुराना रिपोर्टहरू हेरे । धेरै बिरामीहरूको कथाव्यथा सुने । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्याका विभिन्न पाटाहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरे । त्यो समस्या सिकलसेल एनिमिया हो कि भन्ने आशंकामा उनले बिरामीहरूलाई रगतको हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोसिस परीक्षण गर्ने सल्लाह दिए । नेपालगञ्जमा त्यसको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला थिएन । उनले बिरामीबाट रगतको नमुना लिएर परीक्षणका लागि भारतको हरियाणा पठाए ।
प्रयोगशालाको रिपोर्ट डा. पाण्डेले आशंका गरेजस्तै सिकलसेल पोजेटिभ देखियो । थारू समुदायमा सिकलसेल एनिमियाको समस्या रहेछ । यो वंशाणुगत रोग थियो । थारू समुदायका कति बिरामीमा यस्तो समस्या छ भनेर यकिन गर्न उनीसँग पर्याप्त तथ्याङ्क थिएन । दुई बर्ष लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि २०७० साल वैशाख १३ गते डा. पाण्डे निष्कर्षमा पुगे । त्यस दिन उनले थारू समुदायका बिरामीहरूमा सिकलसेल एनिमियासम्बन्धी समस्या रहेको तथ्य र आधार सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे जसमा थारू समुदायका ३९ बिरामीमा सिकलसेल पोजेटिभ देखिएको प्रयोगशालाको प्रतिवेदन समेत समावेश थियो ।
त्यसलगत्तै उनले बिरामीहरूको उपचार सुरु गरे । बर्षौंदेखि उपचार गर्दा पनि निको नभएका बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपले सुधार हुन थाल्यो । डा. पाण्डेले गरेको उपचार सफल भएको चर्चासँगै उनको ओपिडि र क्लिनिकमा बिरामीहरूको भिड लाग्न थाल्यो । त्यसबेला उनका बारेमा अनेकौ नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि भए । थारू समुदायका सोझासादा बिरामीमा सिकलसेल एनिमिया देखाएर झुक्याउँदै पैसा कमाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर डा. पाण्डे त्यस्ता आरोपको पछि लागेनन् । बरु उनले सिकलसेलको लक्षण देखिएका बिरामीलाई आफ्नो निजी क्लिनिकमा समेत पालो नपर्खीकन निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाए ।
बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि उनलाई लाग्यो, थारू समुदायलाई वंशाणुगत रुपमा सर्ने सिकलसेल एनिमियाबाट जोगाउने हो भने सरकारले नै नीति बनाएर यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनले बाँके र बर्दिया जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भेटेर सिकलसेल एनिमिया नियन्त्रणका बारेमा वकालत सुरु गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि त्यसबारेमा पटकपटक मौखिक र लिखित जानकारी गराए ।
आफ्नो अभियान सफल पार्न डा. पाण्डेले सञ्चारकर्मी, थारू समुदायका अधिकारकर्मी र सभासद्हरूको समेत सहयोग लिए । क्षयरोग, एचआइभी संक्रमण र मलेरियाका बिरामीहरूलाई सरकारले बर्षौंदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधिउपचार सेवा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले पनि पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
डा. पाण्डेकै पहलमा बर्दियाका सांसद गोपाल दहितले २०७१ वैशाख र जेठमा पटकपटक संसदमा आवाज उठाए । उनलाई अन्य सांसदहरूले पनि साथ दिए । सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई नयाँ मुद्दाका रुपमा महत्वका साथ स्थान दिए । त्यसपछि सिकलसेल राष्ट्रको गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रुपमा स्थापित भयो । फलस्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचार निःशुल्क हुने घोषणा गरियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको कार्यकालमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले १ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचारसेवा निःशुल्क पाउने नीतिगत व्यवस्था भयो । तदनुरुप २०७१ साउनदेखि महाकाली, सेती, भेरी र लुम्बीनी अञ्चल अस्पतालहरू, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङका साथै बर्दिया, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला अस्पताल तथा काठमाण्डौको निजामती अस्पतालबाट सिकलसेल प्रमाणित भएका बिरामीहरूलाई सहजतापूर्वक निःशुल्क उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाइयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थारू समुदायको बाहुल्य भएका जिल्लाका स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पशिक्षण दिई सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रारम्भिक चरणको उपचार सेवा त्यहीँबाट उपलब्ध गराउन थाल्यो । त्यसपछिका स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले सिकलसेल एनिमिया भएनभएको एकिन गर्नका लागि भेरी र सेती अञ्चल अस्पताल तथा केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोसिस जाँच उपकरण र प्रयोगशालाको व्यवस्था मिलाइदिए । नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा सिकलसेल सेन्टर नै स्थापना भयो ।
कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या देखियो भने त्यसलाई जनस्वास्थ्य समस्या मानिन्छ । एक अध्ययनले थारू समुदायको कुल जनसंख्याको करिब १२ प्रतिशतमा सिकलसेल एनिमिया भएको देखाएको छ । तर यसको उपचार निःशुल्क भएको तीनवर्षे अवधिमा प्रभावितको संख्या घटाउनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सिकलसेलको उपचारमा यति छोटो अवधिमा भएको सुधारका नायक हुन् डा. राजन । उनले अग्रसरता नलिएका भए बिरामीहरूको अवस्था अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ रहन सक्थ्यो ।
डा. पाण्डेको बुझाइमा सिकलसेल एनिमिया कुनै नयाँ रोग होइन । उनी भन्छन्, ‘यो रोगको पहिलो पटक उपचार गर्ने डाक्टर पनि म होइन, नेपालगञ्जमै पनि डा. बिनोद खेतान र डा. प्रज्ञा गौतमले धेरै पहिलेदेखि नै सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्दै आउनु भएको थियो ।’
सिकलसेल एनिमियालाई थारू समुदायमा देखिएको जनस्वाथ्य समस्याका रुपमा स्थापित गर्नु र यसको परीक्षण तथा उपचार सरकारी स्तरबाट निःशुल्क गराउनु आफ्नो प्रयत्नबाट सफल भएका दुई उपलब्धि मान्छन् उनी । डा. पाण्डेकै पहलमा सुरु भएको निःशुल्क उपचार सेवाअन्तर्गत भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जबाट मात्र २०७४ असार मसान्तसम्म ३ सय ७५ जनाले निःशुल्क उपचार सेवा पाएका छन । १३ सय जना बिरामीले आफूलाई सिकलसेल एनिमिया भएको थाहा पाएर सहज रुपमा उपचार गराइरहेका छन् ।
के भन्छन् बिरामी ?
म बिरामी हुन थालेको २० बर्ष भयो । सुरुदेखि नै डाक्टरले भनेअनुसार औषधि खाँदै आएँ । औषधि खाउञ्जेल निको हुने र छाडेपछि बल्झिने गथ्र्यो । मैले नेपालगञ्ज, काठमान्डौ र भारतको लखनउका धेरैजसो अस्पतालहरूमा जचाएँ । कहीँ पनि रोग पत्ता लागेन । सम्पत्ति सकिन थालेपछि बैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया गएँ । त्यहाँको अस्पतालमा पनि दुई पटक जचाएँ । औषधि पनि खाएँ तर निको भएन ।
उपचारमा मैले १० लाख भन्दा बढी सिध्याइसकेपछि २०७२ माघमा भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज पुगेँ । त्यो मेरो तेस्रो आगमन थियो । अरु दुई पटकजस्तै अस्पतालमा भर्ना भएँ । भर्ना भएकै दिन डा. राजन पाण्डेले जाँचेर सिकलसेल एनिमिया भएको आशंका गर्नुभयो । रगत जाँच गर्न इन्डिया पठाउनुभयो । रिपोर्ट आउँदा नभन्दै सिकलसेल एनिमिया नै देखियो । डाक्टर पाण्डेकै सल्लाहमा औषधि खान थालेपछि मेरो स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको छ । उपचारसेवा र औषधि सबै निःशुल्क पाइरहेको छु । डा. पाण्डेलाई भेट्दा त मलाई भगवान भेटेजस्तै लाग्छ ।
–महादेव थारू (सोरहवा, बर्दिया)
शरीरका रक्तकोषहरू हँसिया जस्तो बाङ्गो हुने र रगतको हेमोग्लोबिन तत्वलाई असर पार्ने रोग हो ‘सिकलसेल एनिमिया’ । यो रोग पश्चिम तराईका थारू समुदायमा मात्र देखिएको छ । उनीहरू बसोबास गरेको क्षेत्रमा कुनै बेला मलेरियाको महामारी थियो । पुस्तौँदेखि निरन्तर मलेरियासँग लड्ने क्रममा आदिवासी थारू जातिको जीनमै परिवर्तन आयो जसले रक्तकोषहरू हँसिया आकारमा बाङ्गिने र हेमोग्लोबिन प्रभावित भई रक्तप्रवाहमा अवरोध आउने आनुवंशिक गुणको विकास भयो । यही परिवर्तनले ‘सिकलसेल एनिमिया’ को रुप लिएको हो ।
सिकलसेल एनिमिया भएका बिरामीहरूको मुख्य समस्या हात, खुट्टा र जोर्नीहरू दुख्नु हो । कुनैकुनै बेला दुखाइ सहनै नसक्ने खालको हुन्छ । सबैभन्दा बढी दुखाइको अनुभूति प्रसुतीकालकी आमालाई हुन्छ भनिन्छ तर सिकलसेलका कारण हुने दुखाइ त्योभन्दा पनि दोब्बर पीडादायी हुने डा. राजन पाण्डे बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सिकलसेललाई विश्वमै जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रुपमा देखिएको ठूलो आकारको प्राणघातक वंशानुगत रोगका रुपमा स्वीकारेको छ । सन् २००८ मा राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट अनुमोदन भई जुन १९ तारिखलाई सिकलसेल दिवसका रुपमा संसारभर मनाउने गरिएको छ ।
को हुन डा. पाण्डे ?
डा. राजन पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयबाट उपलब्ध छात्रावृत्तिमा पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस र सरकारी छात्रवृत्तिमै नेशनल एकेडमी अफ मेडिकल साइन्सबाट २०६८ सालमा मेडिसिनमा एमडि गरेका छन् । दुवै तहमा उनी आफ्नो व्याचका उत्कृष्ट विद्यार्थी हुन् । एमबिबिएस पास गरेपछि मेडिकल अफिसरका लागि भएको लोक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि उनले तेस्रो स्थानमा नाम निकालेका थिए ।
पहिलोमा नाम निकाल्ने डाक्टर विदेश गए । दोस्रोमा नाम निकाल्नेले पनि सरकारी सेवा रुचाएनन् । तेस्रोमा नाम निकालेका डा. पाण्डे भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालञ्जमा ६ बर्षदेखि कार्यरत छन् । उनी अहिले नवौँ तहको कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन छन् । ११औँ तहको एउटा पदका लागि भएको लिखित परीक्षामा पास भएका उनी यतिबेला मौखिक परीक्षाको तयारी गर्दैछन् ।
56छुटाउनु भयो कि देश
गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमले मन्त्री दोहोर्‍याउने
भौँराकी हिरोइन अन्जु चौधरी मिस सेन्टर नेपालमा, भोट गरिदिन अपिल
3 thoughts on “सिकलसेलको उपचार निःशुल्क गराउने यी युवा डाक्टर”
Thank you very much Dr. Rajan, we are very thankful getting your services.
My sincere thanks to Dr. Pandey for his service to the Tharu community.
Tharu people are grateful to him.